ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်၏ ၃၂ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့အတွက် မင်္ဂလာသတင်းစကား | Radio Veritas Asia
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်၏ ၃၂ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့အတွက် မင်္ဂလာသတင်းစကား
ချစ်လှစွာသော လူငယ်မောင်မယ်များတို့ . . .
သနားကြင်နာခြင်းနှစ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ လူငယ်များရဲ့ ဂျူဘီလီပွဲတော် ကြီးနှင့်အတူ ပိုလန်နိုင်ငံ ခရက်ကောင်းမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့၃ ၁ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့လူငယ်များ တွေ့ဆုံပွဲကြီးရဲ့ လမ်းမထက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တတွေ ယခု ရောက်ရှိနေကြပြန်ပြီ။ ခေတ်အချိန်အခါရဲ့ စိန်ခေါ်သံတွေကို ထိရောက်စွာ တုန့်ပြန်နားစွင့်နိုင်ဖို့ ဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတမန်တော်တွေဖြစ်တဲ့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဒုတိယမြောက် ရှင်ဂျွန်ပေါလ် နှင့် ရှင်ဖောစတီးနားတို့ကို လမ်းပြသဖွယ် ခံယူခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော အလံတွေ၊ ဘာသာစကားတွေဟာ ဆန့်ကျင်ကွဲပြားခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အရာမဟုတ်ခဲ့ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နှလုံးသားတံခါးတွေကို ဆွဲဖွင့်ပေးပြီး ပေါင်းကူးတံတားတွေကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ခရက်ကောင်း ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ နောက်ဆုံးရက်မှာ လာမယ့်ကမ္ဘာ့လူငယ်ပွဲတော်ကြီးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပနားမား နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့်အကြောင်း ကျွန်ုပ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ စောင်မတော်မူခြင်းအားဖြင့် ၄င်းပွဲ တော်ကြီးက ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကာ ဆုံဆည်စေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်တစ် လျှောက်လုံးမှာ သားစဉ်မြေးဆက်က မင်္ဂလာရှိသူလို့ ခေါ်ဝေါ်ချီးမြောက်ခံရတဲ့ ကညာစင်မာရီယားနှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းကြပါမယ်။ ဒီအသစ်သောခြေတစ်လှမ်းအစဟာ မင်္ဂလာတရားတော်တွေကို ဗဟိုပြုထောက် ရှုခဲ့ကြတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့လူငယ်ပွဲတော်ကြီးက ပေးတဲ့အားအင်တွေနဲ့ ရှေ့သို့ချီတက်ရန် ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ သင်တို့ လူငယ်တွေဟာ အတိတ်ကပုံရိပ်တွေကို နှစ်ခြိုက်အားရရုံတင်မကဘဲ ပစ္စုပ္ပန်ကပေးတဲ့ခွန်အားတွေ၊ အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အတူ ရှေ့သို့ချီတက်ကြိုးစားနေဦးမယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ် အခိုင်အမာ ယုံကြည်နေပါတယ်။ ဒီလို စိတ်နေသဘောထားတွေဟာ နာဇရက်မြို့သူ ကညာစင်မာရီယားရဲ့ဘ၀မှာ ထင်ဟပ် နေခဲ့ပြီးတော့ လာမယ့် ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ ဆောင်ပုဒ်ခေါင်းစဉ်မှာလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါတယ် ဒီနှစ် ၂၀၁၇အတွက် မာညီးဖီကတ်မှာ “အစွမ်းတန်ခိုးနဲ့ပြည့်စုံသောသူသည် ကျွန်မ ၌ ကြီးမြတ်သောအရာများကို ပြုတော်မူပြီ” (လုကာ ၁း ၄၉) လို့ သီဆိုကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ အမိမယ်တော်ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကို ထောက်ရှုကြမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ “ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ ၊ အကြောင်းမူကား သင်သည် ဘုရားရှင်၏ မျက်နှာတော် ပေးခြင်းကို ခံရပြီ” (လုကာ ၁း ၃၀) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ထောက်ရှုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်က ကညာစင်အမိ မယ်တော်မှ သိကြားတမန်တော်ရဲ့ အမိန့်ပြန်ခြင်းကို လက်ခံကြိုဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့ သတ္တိပြည့်ဝသော သူမရဲ့ မေတ္တာတော်ကို ဦးတည်ထောက်ရှုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့မှာတော့ “ကျွန်ုပ်ကား ဘုရားရှင်၏ အစေခံ ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏စကားအတိုင်း ကျွန်မ ၌ ဖြစ်ပါစေ” (လုကာ ၁း၃၈) ဆိုတဲ့ သိကြားတမန်ကို ပြန်ကြားလိုက်တဲ့ အမိမယ်တော်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် အတိ ပြီးသောတုန့်ပြန်ချက်ကို လှုံ့ဆော်ထောက်ရှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလမှာ “လူငယ်များ၊ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အမိအသင်းတော်က ဆရာတော်ကြီးများ အစည်းအဝေးညီလာခံကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအစည်းအဝေးမှာ ယနေ့ခေတ် စိန်ခေါ်သံတွေကြားမှာ သင်တို့လူငယ်တွေ ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာ ကို ဘယ်လို ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေကြရလဲ ဆိုတာကို ပြောဆိုကြမယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရဟန်းဘ၀၊ သူတော်စင်ဘ၀အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးစီရဲ့ ခေါ်တော်မူခြင်းအသ်ကတာကို ဘယ်လို တည် ဆောက်ကြမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြမှာပါ။ ဒါဟာ ပနားမားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာ့ လူငယ်များနေ့နှင့်ဆရာတော်ကြီးများ အစည်းအဝေးညီလာခံအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းကာလတွေ အတွက် ရှေ့ရှု့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကျွန်ုပ်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။
ဒီနေ့ခေတ်က အချိန်ဖြုန်းဇိမ်ခံနေတဲ့ လူငယ်တွေကို မလိုအပ်ဘူး
ရှင်လုကာ ဧ၀ံဂေလိကျမ်းစာစောင် (၁း၃၆-၃၉) မှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် မယ်တော်မာရီယားဟာ သိကြားတမန်ရဲ့ သတင်းစကားကို ရရှိပြီး ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်ဖို့ ဖိတ်ကြားကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ထဲ မယ်တော်ဟာ ခြောက်လသားအရွယ် ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရတဲ့ အမတော်ဧလိဇဘတ်ကို သွားရောက် ကြည့်ရှုဖို့ အလျင်အမြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ မာရီယားဟာ အရမ်းကို ငယ်ပါသေးတယ်။ သူမကို ပြောလိုက်တဲ့သတင်းစကားဟာ အလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ လက်ဆောင်မွန်တစ်ခု ဖြစ်သလို နောက်ဆက်တွဲ စိန်ခေါ်မူတွေလည်း ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က သူမကို အတူတည်ရှိပေး ကာ ထောက်မအားပေးခြင်းတွေနဲ့ ခိုင်မာရပ်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူမရဲ့ စိတ်နှလုံးသားထဲမှာ မရေရာ မသေချာမှုတွေလည်း ကျန်ရှိနေပါတယ်။ မယ်တော်ဟာ အိမ်တွင်းမှာ မိမိကိုယ်ကို ပိတ်လှောင်မထား ခဲ့ဘူး။ ကြောက်ရွံမှုတွေ မာနတွေနဲ့ လည်း အဆုံး မသတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မယ်တော်မာရီယားဟာ မိမိတစ်ကိုယ်စာ လုံခြုံပြီး အကောင်းစားဆိုဖာပေါ်မှာ ဇိမ်နဲ့ နှပ်ကာ ကျေနပ်နေမယ့် မိန်းမစားမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ အသက်အရွယ် အိုမင်းရင့်ရော်နေတဲ့ အစ်မဖြစ်သူက ကူညီလိုနေတာကိုသိတဲ့အခါ နှောင့်နှေးတွန့်ဆုတ်မနေခဲ့ဘူး။ အလျှင်အမြန် ချက်ချင်းအကူညီ ထပေးခဲ့တဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧလိဇဘတ်ရဲ့ အိမ်ကို သွားတဲ့ခရီးဟာ ကီလိုမီတာ ၁၅၀လောက် ဝေးကွာလွန်းလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ကညာစင် မိန်းမပျိုလေးဟာ ၀ိဉာဉ်တော်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူပြီး အခက်ခဲတွေကိုလည်း မသိ၊ မမြင်တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက သွားခဲ့တဲ့ခရီးဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ အံ့ဖွယ်စီမံကိန်းမှာ သူမကလည်း ပါဝင်ပတ်သက် နေရတယ်ဆိုတာကို ထောက်ရှုစဉ်ခြင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွေလည်း ခရီးပြုထွက်ခွာတဲ့အခါ ဘုရားရဲ့စီမံကိန်းမှာ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ ထောက်ရှုရမှာပါ။ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀အတွေ့ကြုံတွေဟာ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံး ခေါင်းထဲမှာ အစီအရီဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ဘ၀ပေးသင်ခန်းစာ အဓိပ္ပါယ်တွေကို လက်ခံအသိမှတ်ပြုကာ ခေါ်တော်မုခြင်းကို ဆန်းစစ်ကြရပါမယ်။ ဒါမှသာ ဘု၇ားရှင်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း၊ အခြားသူ တွေကို အစေခံခြင်းတွေမှာ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ရှင်းလင်းပြတ်သားလာတော့မှာဖြစ်တယ်။
စွမ်းအားတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသူသည် ကျွန်မ၌ ကြီးမြတ်သောအရာများကို ပြုတော်မူပြီ . . .
မိန်းမပျိုတစ်ဦးနှင့် ဇရာရင့်ရော်ပြီဖြစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ဦးတို့ ဆုံတွေ့ကြတဲ့အချိန်ဟာ သန့်ရှင်းသော ၀ိဉာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝပြီး ပျော်ရွှင် အံ့သြခြင်းတွေလည်း ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့လွယ်ထားရတဲ့ ကလေး သူငယ်တွေလိုပဲ မိခင်နှစ်ဦးစလုံးဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ကခုန်မြူးထူးနေခဲ့ကြတယ်။ မာရီယားရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကို မြင်တွေ့အားရကာ ဧလိဇဘတ်က “ဘုရားသခင် မိန့်မြွက်တော်မူသမျှကို ပြည့်စုံမည်ဟု ယုံကြည်သော မိန်းမသည် မင်္ဂလာရှိ၏”လို့ အားပါးတရ ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ မယ်တော် ရရှိခဲ့တဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံး လက်ဆောင် တွေထဲက တစ်ခုက အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းလက်ဆောင်ပါပဲ။ ဒီအတွက်ကြောင့် ဧလိဇဘတ်က မယ်တော့်ကို မင်္ဂလာရှိသူလို့ သြဘာကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ အမိမယ်တော်ကလည်း မာညီးဖီးကတ်သီချင်းမှာ “အစွမ်းတန်ခိုးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသော သူသည် ငါ့အတွက် ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကို ပြုခဲ့ပြီ” လို့ တဖန် ချီးမွမ်း ကြွေးကြော်ခဲ့ပါ တယ်။
မာရီယား မြွက်ဆိုခဲ့လိုက်တဲ့ သီချင်းဟာ ခွဲထွက်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ ဆုတောင်းမေ တ္တာလေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည့်ခြင်းအပြည့်နဲ့ ဒီသီချင်းမှာ မိန်းမပျိုလေးဟာ သူမရဲ့ မတက်စွမ်းနိုင်မှုတွေကို သိထားတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ကရုဏာတော်ကို လုံးဝ ယုံကြည်အပ်နှံထားတယ်။ နှိမ့်ချတဲ့ သူမအဖြစ်ကို ကြည့်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်၊ ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကို ဆင်းရဲနှိမ့်ချသူ၊ လူအားလုံးအတွက် ယူဆောင်လာခဲ့ တဲ့ ဘုရားရှင်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းက မယ်တော့်ဘ၀သမိုင်းတစ်လျောက်လုံးရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ် ဗဟိုပါပဲ။ သူမ သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းက ဘုရားရှင်ရဲ့ ကရုဏာတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီတိုင်းနဲ့ လူသားထုအားလုံးရဲ့ သမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေရဲ့နောက်က တွန်းအားတစ်ခုအဖြစ် နားလည်နိုင်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
လူငယ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဘုရားရှင် ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ သူတို့တွေဟာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ အမှုအရာတွေကို လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ရှိလာပါတယ်။ မယ်တော်ရဲ့ဘ၀မှာ ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကို ပြုခဲ့တဲ့ ဘုရားရှင်ဟာ ကျွန်ုပ်တုိ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ခရီးတွေမှာလည်း မိန့်ကြားပေးနေပါတယ်။ ဒါဟာ အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့ပြီး ဦးတည်ချက်မရှိတဲ့ခရီးလမ်းမဟုတ်ဘူး။ မရေရာမှုတွေနဲ့ ဝေဒနာဒုက္ခတွေအားလုံးဟာ ဘုရားရှင်၌ စုံလင် ပြည့်ဝသွားစေတဲ့ ဘုရားနဲ့ဆုံဆည်းရာ ခရီးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ကိုယ်တော် တပည့်တော်မှာ အားနည်းချက် တွေရှိတယ်။ တပည့်တော်ဟာ အပြစ်သားတစ်ယောက်ပါ၊ ဘယ်လိုလုပ် တက်နိုင်မှာလဲ” လို့ သင်တို့ ပြောချင် ပြောပါ လိမ့်မယ်။ ဘုရားက ခေါ်တဲ့အခါမှာ ငါတို့ ဘယ်သူလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရှင်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရှေ့လျှောက် ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲ၊ ဆိုတာကိုပဲ ကြည့်မှာပါ။ ဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့မှာလည်း ပေးဆပ်နိုင်စွမ်းတွေရှိလာပါတယ်။ ကညာစင် မာရီယားလိုပဲ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ပိုကောင်းလာဖို့အတွက် သင့်ဘ၀ကို လက်နက်တစ်ခုလို ဘုရားရှင်အား အသုံးပြုခွင့် ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တစ်ခုလုံးနှင့် ၊ လူသားထုအားလုံးရဲ့ ဘ၀တွေအတွက် သင့်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း တစ်နေရာကို ချန်ထားရစ်ဖို့ ယေဇူးဘုရားက သင်တို့အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။
လူငယ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာ အတိတ်နှင့် ဖြတ်တောက်ထားခြင်း မဟုတ်
သင်တို့အများစုလိုပဲ မာရီယားဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထက် သာရုံဆိုသလောက် မိန်းမငယ်လေး တစ်ဦးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မာညီဖီးကတ်သီချင်းမှာ သူမရဲ့ လူမျိုးစုနှင့် သူတို့ရဲ့သမိုင်းကို ချီးမွမ်းပဲတင်ထပ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့ လူငယ်ဖြစ်တာနဲ့ အတိတ်က သမိုင်းနဲ့ အဆက်သွယ်မရှိတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြ ပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်းသမိုင်းဆိုတာ ရှေ့က ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်း ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းရှည်ကြီးတစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မယ်တော်မာရီယားလိုပဲ ကျွန်ုပ်တို့လည်း လူမျိုးနွယ်စု တစ်ခုခုတော့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေကြတာပဲလေ။ မုန်တိုင်းထန်တဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှာ အသင်းတော်ဆိုတဲ့ သင်္ဘောကြီး ရွက်လွှင့်ရတဲ့အခါမှာလည်း သမိုင်းက သင်ခန်းစာတွေ ပို့ချပေး လိုက်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့လက်တော်အားဖြင့် အသင်းတော်ကို ကာကွယ်လမ်းပြနေတယ်၊ ခက်ခဲဒုက္ခတွေကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားဖို့ ဘုရားရှင်က ကူညီစောင်မပေးနေပါတယ်။ အမိအသင်းတော်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာ လူတစ်အုပ်စုလိုက် တွေ့ဆုံကာ ကိုယ့်ကိစ္စပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်လမ်းကို သွားကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဟိုး ရှေးကာလက ဆွေစဉ်မျိုးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေကို အမွေအဖြစ်ခံယူထိန်းသိမ်း ထားပြီးမှ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘ၀သမိုင်း တွေဆိုတာ တကယ်တော့ အမိအသင်းတော်ရဲ့ သမိုင်းကြီးအထဲမှာ နေရာယူတည်ရှိနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်ကို အောက်မေ့ဆင်ခြင်ခြင်းကလည်း ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကနေတဆင့် ဘုရားရှင် ဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လက်ခံစောင့်ကြိုတတ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ နောက် ပြီးတော့ ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို နည်းလမ်းသဖွယ်အသုံးပြုပြီး ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကို ဆောင်ကျဉ်းပေးဖို့ ဘုရားရှင် ရွေးချယ်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု ကူညီပေးပါတယ်။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ဘ၀ထဲမှာ ဘုရားရှင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးတော်နဲ့ ကရုဏာတော်ကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံတတ်မယ်ဆိုရင် ကြီးကြီးမားမား အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တာဝန်တွေလည်း အပြည့်အ၀ ယူနိုင်ကြပါတယ်။
လူငယ်တွေကို မေးခွန်းတချို့ မေးချင်ပါတယ်။ ဘ၀အတွေ့အကြုံ၊ အဖြစ်အပျက်တွေကို သင်တို့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ ဘယ်လိုများ သိမ်းဆည်းထားပါလဲ။ မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ ပြောပြနေတဲ့ ပုံရိပ်အချက်အလက်တွေ ကို ဘာ လုပ်ပစ်လိုက်လဲ။ တချို့က အတိတ်ကခါးသည်းနာကျည်းစရာ ဘ၀အခြေအနေတွေကို ချေဖျက်ပစ်ြ ပီး သေချာ ပေါက် အသစ်က ပြန်စချင်ကြမှာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် အားလုံးကို မေ့ပစ်လိုက်ပါပြီလို့ ပြောချင်ပြောကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်တွေကို ကျွန်ုပ် သတိတစ်ခုပေးချင်တယ်။ အတိတ်မရှိခဲ့တဲ့ ရဟန္တာဆိုတာမရှိသလို အနာဂတ်မဲ့တဲ့ အပြစ်သားဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ ပုလဲဆိုတာ ကမာကောင်လေးတွေရဲ့ နာကျင်မျက်ရည်ကနေ မွေးဖွားလာခဲ့ ရတာပါ။ သခင်ယေဇူးက သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ နာကျင်နှလုံးသားတွေကို ကုစားပေးနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီ ဒဏ်ရာတွေကနေ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပုလဲစစ် ရတနာလေးတွေဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ရှင်ပေါလု ပြောခဲ့သလိုပဲ သခင်ခရစ်တော်ဟာ လူ့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကနေတဆင့် သူ့ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အစွမ်းအစကို ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အတိတ်က အဖြစ်အပျက်တွေဟာ အစိုင်အခဲတစ်ခုလို ရပ်တန့်သေဆုံးနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အတိတ်ဖြစ်ရပ်တွေကနေ သုံးသပ်သင်ခန်းစာယူကာ လက်ရှိဘ၀နဲ့ အနာဂတ်အတွက် အဓိပ္ပါယ်အသစ်တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လေ့လာကြဖို့ လိုပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့အလုပ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာမှ မရှိဘူး။ အဲ့ဒီအထဲမှာမှ ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ဖြစ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ မေတ္တာတော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိအောင် ကြိုးစားကြဖို့တော့ လိုပါတယ်။
လူငယ်တွေဟာ ဟေးလားဝါးလားနဲ့ သာမန်ကာလျှံကာ အနှစ်မရှိကြသူတွေလို့ တော်တော် များများက ပြောနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့သူတွေ အရမ်းမှားသွားပါပြီ။ ဘ၀ကို စဉ်းစားသုံးသပ်ကာ အနာဂတ်ကို လေးလေးနက်နက်နဲ့ ဦးတည်လျှောက်လှမ်းကြသူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အတိတ်ရှိဖို့ဆိုတာ သမိုင်းရှိတာနဲ့ မတူပါဘူး။ ဘ၀မှာ အဖြစ်ပျက်တွေအများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နှစ်ခုလောက်များ တကယ့်အဖြစ်ပျက် ပုံရိပ်တွေအဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့လဲ။ ဘယ်လောက်ထိ နှလုံးသားထဲမှာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီး ကျန်ရစ်ပြီး ဘ၀ကို အဓိပ္ပါယ်တွေ ဖြစ်စေခဲ့လဲ။ မီဒီယာတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာလည်း ဘယ်လောက်ထိစစ်မှန် ပြီး သမိုင်းတွင်ခဲ့စေလား၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ချပေးလိုက်တဲ့ အတွေ့ကြုံတွေများ ဖြစ်နေမလားတာ ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဘ၀အစစ်အမှန်တွေမဟုတ်တဲ့ အမှန်အကန်ဇာတ်လမ်း တွေ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဟာ ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ယူထားတဲ့ နေ့တဓူဝရှင်သန်မှုတွေကို ခဏတဖြုတ် သရုပ်ဆောင် ထားတာပဲလေ။ ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ဆောင်ဟာ ပီပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ရုပ်နဲ့ ရှေ့ဆက် အစီစဉ်တွေ တိုးချဲ့နေစရာမလိုတော့ဘူး။ လူငယ်တွေလည်းပဲ အစစ်ကို ဖုန်းထားတဲ့ အတုအယောင် ပုံရိပ်တွေ ကြားမှာ လှည့်စားမခံပါနဲ့။ ကိုယ့်သမိုင်းကို ရေးထိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြပါစေ။ ကိုယ့်အနာဂတ်ကို ကိုယ်ကိုတိုင် ဆုံးဖြတ်ပါ။
မယ်တော်ကို အတုယူပြီး ဘယ်လို ပြန်လည် ဆက်နွယ်ကြမလဲ
မယ်တော်ဟာ ခပ်သိမ်းသောအရာအားလုံးကို အောက်မေ့နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ပါတယ်လို့ (လုကာ၂း၁၉) မှာ ပြောထားပါတယ်။ ဘ၀အဖြစ်အပျက်တိုင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို သိမ်းဆည်းမှတ်ယူကာ ကြေကွဲသွားတဲ့အပိုင်း အစတွေကို အတူပြန်လည်စုစည်းတည်ဆောက်ကြဖို့ နာဇရက်မြို့သူ ကညာစင် မာရီယားလေးက သင်ကြားပေး နေပါတယ်။ ဒါကို လက်တွေ့ဘယ်လို အသုံးချကြမလဲ။ သင်တို့ကို အကြံဉဏ်တစ်ချို့ ကျွန်ုပ် ပေးပါရစေ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ညအိပ်ယာ မ၀င်ခင်လောက်မှာ ပျော်စရာအချိန်တွေ၊ စိန်ခေါ်ချိန်တွေ၊ အကောင်း ဆုံး ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေ၊ မှာသွားခဲ့တာတွေအားလုံးကို သတိရဖို့ ခဏလောက် ငြိမ်သက်စွာ စဉ်းစားပါ။ ဒီလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရှေ့မှာ ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်း၊ အမှားတွေအတွက် တောင်း ပန်ခြင်း၊ ယုံကြည်အပ်နှံတတ်ခြင်းတွေကို ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ ဆန္ဒရှိရင် မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ ၀ိဉာဉ်ရေးရာ အတိုအထွာလေးတွေ ရေးချနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘ၀ထဲမှာ၊ ဘ၀နဲ့အတူ၊ ဘ၀အကြောင်း ဆုတောင်းကြတာပါပဲ။ ဘုရားရှင် သင်တို့အတွက် ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့သမျှကိုလည်း ပြန်လည်အောက်မေ့စေဖို့လည်း အကူ ညီပြုမှာ အသေချာပါပဲ။ ရဟန္တာ ရှင် သြဂုတ်စတင်းက “ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အတိတ်ပုံရိပ်ကွင်း ပြင်ကျယ် ကြီးထဲမှာ ဘုရားရှင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်” လို့ မိန့်ခဲ့ဖူးလေတယ်။
မာညီဖီကတ်သီချင်းကို ဖတ်ကြည့်ရင် မယ်တော်မာရီယားက ဘုရားရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို ကောင်း ကောင်းသိနေခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်နိုင်တယ်။ ယေဇူးဘုရားရဲ့ မိခင်ငယ်လေးဟာ သူ့ လူမျိုးတွေရဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာသံတွေကို အလွတ်ရနေခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ မိဘ၊ အဘိုးအဘွားတွေကလည်း သေသေချာချာ သင်ကြားလမ်းပြပေးခဲ့တာလည်း ဆိုင်တာပေါ့။ ယုံကြည်ခြင်းကို သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေး တယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်တောင် အရေးကြီးလို့လဲ။ ရှေးဘိုးဘေးတွေသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာထဲ မှာ ဘုရားတရားနဲ့ ရိုးစင်းစွာရှင်သန်ခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ ၀ိဉာဉ်ရေးလမ်းစဉ်တွေထဲမှာ ရတနာအမွေအနှစ်တွေ မြှုပ်နှံထားတယ်။ သူ့လူမျိုးတွေရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းအမွေကို မယ်တော်က လမ်းကမ်းရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကို သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီကျူးသံစဉ်သီချင်းတစ်ပုဒါအဖြစ် သီကုံးဖွဲ့နွဲ့ခဲ့လိုက်တယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒီသီချင်းကို သူမနဲ့အတူ အမိအသင်းတော် တစ်ခုလုံးကလည်း ဟစ်ကြွေးသီဆိုနေကြပါပြီ။ လူငယ်တွေလည်း အမိမယ်တော် လိုပဲ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မာညီးဖီးကတ်သီချင်းကို သီဆိုချင်တယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ဘ၀ကို လူသားထု တစ်ရပ် လုံးအတွက် လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်ပါ။ သင်တို့အရှေ့က ဘိုးဘွားတွေရဲ့ ဆုတောင်းသံတွေ၊ သမိုင်းဝင် ထုံးတမ်းအစဉ်လာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်နော်။ ဒီလိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာကိုနေ့စဉ်ဖတ်ရှု နာယူနှလုံးသွင်းရပါမယ်။ဒါမှလည်း ဘုရားရဲ့ အသံကို နားစွင့်ကာ နေ့စဉ်ဘ၀အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာဖွေနိုင်မှာလေ။ ကျမ်းစာကို ဆုတောင်းဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာ သခင်ယေဇူးက နှလုံးသားကိုနွေးထွေးစေကာ ခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတောင် သူလမ်း ပြခေါ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
မယ်တော်က ကိုယ်တော်မြတ်စက္ကရမင်တူးနဲ့ မွေ့လျော်ရှင်သန်တတ်အောင်လည်း သင်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ်စက္ကရမင်တူးအားဖြင့် ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့နဲ့ ပြသနာ အခက်ခဲတွေမှာပဲ ငြိတွယ်မချည် နှောင်ထားဖို့ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ရှင်သန်ခြင်းအသက်တာမှာ ဒီယနေ့ ဆုတောင်းသံဟာ မနက်ဖြန်အတွက် ကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်လာရပါမယ်။ ဒီနည်းအတိုင်း မစ္ဆားတရားတော်မြတ်မှာ ပါဝင်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ အာပါတ်ဖြေခြင်း စက္ကရမင် တူးမင်္ဂလာကို ခံယူတဲ့အချိန်တိုင်းဟာ အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကို ရောက်စေပြီး အသစ်စတင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါ တယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းမှာ ဘ၀ကို အသစ်ပြုပြင်လိုက်တာဟာ ဘုရားရှင်ကို အဆက်မပြတ်ချီးမွမ်း လိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ “ ဘုရားရှင်ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်တော်ကို ယုံကြည်လိုက်ပါ . . . သူ့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်တော်ဟာ သနားကြင်နာ နှုးညံ့ ခြင်းတွေပြည့်နှက်နေပြီး အပြစ်ခြေရာတွေကို ချေဖျက်ပေးရတာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုမို့ပါ” ။
မယ်တော်မာရီယားက အမတော် ဧလိဇဘတ်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ သူမရဲ့ နှလုံးသားသံစဉ် မာညီဖီ ကတ် သီချင်းကို သီဆိုခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ကြပြီ။ မယ်တော့်ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်း၊ အံသြမှင်သက်ဖြစ်ရခြင်းတွေနဲ့ သူမ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကြောင့် အစ်မတော် ဧလိဇဘတ်က ဘုရားရှင် မယ်တော့်ကို အပ်နှံခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတော်နှင့် သူမဘ၀မှာ ဘုရားရှင် ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေ ပြုနေတယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ သင်တို့ ရော ဘယ်လိုနားလည်ကြလဲ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ဇရာရင့်ရော် အိုမင်းနေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦး တို့ ဆုံဆည်းခြင်းမှာ ထူးထူးခြားခြား လှုံ့ဆော်ခံစားလိုက်ရလား။ သင်တို့ရဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကိုရော ဘယ်လောက် အာရုံထားပြီး ကရုစိုက်ပေးနေလဲ။ မြင့်မြင့်မားမား ပျံသန်းဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ နှလုံးသားတွေကလည်း ကြီးမြတ်တဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ ပြည့်နေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးသူမတွေရဲ့ ဆုံမပဲ့ပြင် လမ်းကြောင်းပေးမှုကိုလည်း ခံယူဖို့ လိုတယ်။ အတောင်ပံတစ်စုံကို ဖြန့်ကျက်ကာ ပျံသန်းလိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သင်တို့ရဲ့ဇစ်မြစ်ကို ပြန်လည်ရှာဖွေကာ အရှေ့က အလင်းပြလျှောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းကိုလည်း လျှောက်လှမ်း ဖို့လည်း လိုတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ဖို့၊ အတိတ်ကိုသိပြီး နှစ်ခြိုက်အသိမှတ် ပြု ဖို့လည်း လိုတယ်။ လူငယ်တွေမှာ ခွန်အားတွေရှိတယ်။ လူကြီးတွေမှာ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဉာဏ်ပညာတွေရှိ တယ်။ မယ်တော်က ဧလိဇဘတ်ကို ပြုခဲ့သလို သင်တို့ရဲ့ အဘိုးအဘွား လူကြီးသူမတွေကို ကြည့်ပါ။ သူတို့တွေ က သင်တို့ရဲ့ စိတ်ကို ခွန်အားဖြစ်စေပြီး နှလုံးသားကို ပြည့်ဝစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေ ပြောကြားပေး လိမ့်မယ်။
အနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် ဆန်းသစ်တဲ့ သစ္စာတည်ကြည်မူ
သင်တို့က ငယ်သေးတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရှေးထုံးအစဉ်အလာတွေရဲ့ အရေးပါ အရာ ရောက်မူ တွေကို နှစ်ခြိုက်လက်ခံဖို့ ခက်ခဲနိုင်တယ်။ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာကို လက်ခံကျင့်သုံးတာဟာ ရှေးရိုးစွဲ ဆန်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့အတွက် ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကို ဘုရားရှင် ပြုတော်မူတယ်လို့ မယ်တော် ပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာ အဲ့ဒီကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေဟာ မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဆက်လက်ဖြစ်နေတုန်းပါ။ အလှမ်းကွားဝေးတဲ့ အတိတ်ကာလ တစ်ခုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အတိတ်ကို မှတ်မှတ်ရရရှိနေတတ်တာဟာ သမိုင်းကာလတစ်ခုမှာ ချည်နှောင်ကျန်ရစ် စမြုပ်ပြန်နေတာကို ပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ဟာ ဘယ်ကနေ လာခဲ့လဲဆိုတာကို သိမြင်နိုင်ဖို့အတွက် အတိတ်ကို အမှတ်ရခိုင်းခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကို ပြန်သွားနိုင်မယ်။ အနာဂတ်ကိုလည်းဆန်းသစ်တဲ့ သစ္စာတရားတွေနဲ့ ပုံအပ်တည် ဆောက်နိုင်လာမယ်။ လုပ်နေကျအတိုင်း တစ်ပုံစံထဲ ပြန်လုပ်တာကလည်း အသုံးမတည့်တဲ့အပြင် ပြသနာတွေ လည်း ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ အိပ်မက်တွေ၊ မရေရာမှုတွေကြားထဲမှာ ပြောင်းလဲဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုခဲ့တဲ့ သူတွေကို ဘယ်နှစ်ယောက်များ ချေပငြင်းဆိုခဲ့ကြလဲ။ အတိတ်က ပေးတဲ့ အမွေဟူ သမျှကို ချန်ထားပစ်ဖို့သာ စိတ်ထက်သန်နေတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပဲ လူ့ဘောင်အသိုင်းဝိုင်းက တန်ဖိုးထားလာကြတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခြင်းတွေ၊ သူတော်စင်ဘ၀တွေနှင့် ရဟန်းဘ၀တွေကို ကြည့်ပါ။ ဒါတွေဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိ ခေတ်နောက်ကျနေတဲ့ ဘ၀ရှင်သန်ခြင်းတွေလို မြင်လာကြတယ်။ နေချင်သလို နေပြီး ရည်ရွယ်ချက် ရေရေရာရာမရှိတဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘ၀ကပဲ ပိုကောင်းတယ်လို ထင်နေကြတယ်။ လူငယ်တွေလည်း ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာ အငိုက်မမိပါစေနဲ့။ ဘုရားသခင်ကြွလာခဲ့တာဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀တွေကို လမ်းညွန်ချဲ့ထွင်ပေးဖို့အတွက်ပါ။ အတိတ်ရဲ့ အထိုက်အလျောက် တန်ဖိုးရှိစေပြီး ပျော်ရွင်ဖွယ် အ နာဂတ်ကို တည်ဆောက်နိုင်အောင် ကူညီစောင်မပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စစ်မှန်ပြီး မေတ္တာတရားတို့ ပြည့်ဝတဲ့အတွေ့ကြုံတွေ ရှိမှလည်းဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအတွေ့အကြုံတွေက ဘုရားရှင်ရဲ့ ခေါ်သံကို နားစွင့်တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့ အကူညီဖြစ်စေပြီး စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ယူဆောင်ပေးပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော လူငယ်များတို့ . . . ၊ လာမယ့် ပနားမားနိုင်ငံ လူငယ်ပွဲတော်ခရီးစဉ်ကြီးကို ဆရာတော် ကြီးများညီလာခံအစည်းအဝေးနဲ့အတူ ကညာစင်အမိမယ်တော်ရဲ့ ကြားဝင်ဆုပန်းခြင်းကို အားကိုးအမှီပြုပြီး အပ်နှံထားပါတယ်။ ၂၀၁၇ နှစ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ၂ခုကိုလည်း စိတ်ထဲ အမှတ်ရဖို့ တောင်း ဆိုချင်ပါတယ်။ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ကြီး ၂ ခုကတော့ ဘရားဇီးလ်နိုင်ငံ အပါရီးစီးဒါး မယ်တော်သခင်မရဲ့ ဆင်းတုတော် ပြန်လည်တွေ့ရှိခြင်း နှစ် ၃၀၀ ပြည့်ပွဲတော်ကြီးနဲ့ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ ဖာတီမာမြို့မှာ မယ်တော် အထင်ရှားပြ ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့်ပွဲတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားအလိုတော်ရှိခဲ့ရင် လာမယ့် မေလမှာ ပေါ်တူဂီကို ဘုရားဖူး ဒေသစာရီကြွချီဖို့ ကျွန်ုပ် စီစဉ်နေပါတယ်။ လာတင်းအမေရိကားရဲ့ ကိုးစားရာ ရဟန္တာ တစ်ပါးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ပွဲတော်ကြီးအတွက် ကိုးစားရာ ရဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့ ရှင်မာတင်း ဒီပေါရက်စ်က သူရဲ့အမေ့အပေါ်ထားရှိတဲ့ သားတစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာ အမှတ်လက္ခဏာအနေနဲ့ မယ်တော်သခင်မကိုနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို နှိမ့်ချစွာနဲ့ အကောင်းဆုံးပန်းတွေအဖြစ် ပူဇော် ဆက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တို့လည်းပဲ အမိမယ်တော်နဲ့ တရင်းတနှီး အကျွမ်းတ၀င် ဆက်နွယ်ပက်သက်နိုင်အောင် ပျိုးထောင်နိုင်ကြပါစေ။ သင်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန် စိုးရိမ်ခြင်းတွေကိုလည်း အမိမယ်တော်ထံ အပ်နှံပူ ဇော် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်လိုက်လို့ သင်တို့တွေ နောင်တ မရစေရဘူးလို့ ကျွန်ုပ် ပြောနိုင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ပိုပြီးနီးစပ်စေဖို့ ရူပါရုံတွေအမျိုးမျိုးပြပြီး ဘွဲ့နာမပေါင်းများစွာ ခံယူချီး မြောက်ခံ ရတဲ့ နာဇရက်မြို့သူ ကညာစင် မယ်တော်မာရီယားက ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ကြားဝင်ဆုပန်ပေး ကာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘ၀မှာ ဘုရားရှင် ပြုလုပ်တော်မူတဲ့ ကြီးမြတ်သောအရာတွေအတွက် သီဆိုချီးမွမ်းနိုင်အောင် ကူညီစောင်မတောင်မူပါစေသောဝ် ။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်
ဗာတီကန်၊ ၂ရ ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၂၀၁၇။
(သီကိုရှင်း မှ ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်)